မိန်းမတယောက်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » မိန်းမတယောက်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှု	33
Posted by La Yeik on Dec 4, 2014 in Creative Writing, Drama, Essays.., Short Story | 33 comments
ဒီအကြောင်းအရာလေးကို ဘာလို့ ရေးဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒီလို အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေတာတွေ
တွေ့တွေ့နေရလို့ပါ…အခုခေတ်မှာ လူတွေလိုက်နာရမယ့် နီတိတွေ၊ကျင့်ဝတ်တွေကို တော်တော်များများက မသိတော့တာပဲလား
သိခဲ့ရင်တောင်မှ လိုက်နာဖို့ ခက်ခဲကျတာလား မသိတော့ပါဘူး…ဒါပေမယ့် ကြားကမြေစာပင် ဖြစ်မယ့် ကလေးတွေကိုတော့
သနားတယ်….အချို့သောမိန်းကလေးတွေကလည်း အရွယ်လေးရောက်လာတော့ လှချင်၊ပချင်၊၀တ်ချင်၊စားချင်ကြနဲ့
အခုခေတ်စားနေတဲ့ စပွန်ဆာရှာတာမျိုး၊KTV,Massage ရောက်ကုန်တာမျိုးတွေ တွေ့နေရတယ်…ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်
ကိုယ်တက်တဲ့ ပညာလေးနဲ့ ရိုးရိုးသားသားလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြတဲ့ မိန်းမကောင်းလေးတွေလည်းရှိပါရဲ့….မိသားစုအတွက်
ရိုးရိုးသားသားရှာဖွေကျွေးမွေးလို့ ရပါလျှက်နဲ့ ဘာလို့များ မိန်းကလေးတွေ ပျက်စီးကုန်ကြတာလဲလို့ ကျွန်မ တခါတလေ တွေးမိတယ်
အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသားများကလည်း ခဏတာသာယာမှုအတွက်နဲ့ မိသားစုမျက်ရည်တွေ လဲကုန်ကြတယ်….
မိသားစုအပါ် အလွန်ကောင်းပြီး အနစ်နာခံတဲ့ ဖခင်၊မိခင်များကို ဂုဏ်ပြုရင်း ဒီ ၀တ္ထုတိုလေးကို ရေးလိုက်ပါတယ်…..
ခံစားမှုတွေကို စာအဖြစ်အသက်သွင်းရာမှာ အမှားပါခဲ့ရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ကြပါလို့…..
နဲနဲရှည်သွားလို့ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ရတာ တောင်းပန်ပါတယ်နော်….
“မနက် မောင် meeting ရှိတယ်နွယ် အဲဒါစောစောသွားရမယ်“
“ဟုတ်လား ဘယ်အချိန်သွားရမှာလဲ မောင်“
“အဲဒါဆို ထမင်းဂျိုင့်အတွက်စောစော ထမှပဲ“
“မလုပ်ပါနဲ့ နွယ်ရယ် တရက်တလေပဲဟာ မောင်အပြင်မှာပဲ သွားစားလိုက်တော့မယ်“
“အယ် ရပါတယ်အပြင်စာတွေက ရောဂါရတယ်မောင်ရဲ့ ညစ်လည်းညစ်ပတ်တယ်“
“မောင်က နွယ်ပင်ပန်းမှာစိုးလို့ပါကွာ “
“ရတယ် ထမင်းဂျိုင့်ထည့်ပေးလိုက်မယ် နော်မောင်“
မနက်(၅)နာရီ alarm ကြောင့် နွယ်နိုးသွားသည်။
မောင်နဲ့သားလေး နိုးသွားမှာ စိုးသဖြင့် ph alarm ကို vibrate လုပ်ထားလိုက်သဖြင့်သာ တော်တော့သည်။
ဒီပြင်ဆို အအိပ်ဆတ်သော သားလေးနိုးသွားရင် မခက်လား…
မောင့်အတွက် ထမင်းဂျိုင့် ပြင်ပေးရန် မီးဖိုချောင်သို့ ဖြည်းဖြည်းလေး ခြေဖေါ့နင်းရင်းထွက်ခဲ့သည်။
ရေခဲသေတ္တာထဲမှ ၀က်သားပြုတ်ထားသည်ကို ပြန်ကြော်ပေးပြီး အစိမ်းကြော်ကြော်ရန် အသီးအရွက်များသင်လိုက်သည်။
ချက်ပြုတ်ပီး နာရီကြည့်တော့ 6နာရီမထိုးသေး မနက်စာအတွက် ထမင်းကြော်နှင့်ကော်ဖီ ပြင်လိုက်သည်။
မျက်နှာသစ် ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီးဘုရားဆွမ်းတော်ကပ် အကုန်ပီးတော့ 6.20 ရှိပီ မောင့်ကို သွားနှိုးရမည်။
မနှိုးခင် မောင်ရေချိုးဖို့ သွားတိုက်တံ ကို သွားတိုက်ဆေးညှစ်ပီး ဘေစင်ပေါ်တင်ပေးထားသည်။
ရုံးယူနီဖောင်းကို ဗီရိုထဲမှ ထုတ်ပေးထားလိုက်သည်။
မောင့် နဖူးကို အသာနမ်းရင်း ….
“မောင် ထတော့လေ 6.30 ပီ“
“အင်း ဟုတ်လား ထပီ ထပီ“
“ဖြည်းဖြည်းထဦး သားလေးကိုထိလို့ နိုးသွားဦးမယ်“
အိပ်ရာထသွားသော မောင့်ကျောပြင်ကို ကြည့်ရင်း နွယ်ကြည်နူးစွာ ပြုံးလိုက်မိသည်။
နွယ့်ဘ၀က မောင် နှင့် သားလေး ပဲ..သူတို့မရှိရင် နွယ် ဆိုတာလည်း ရှိမှာ မဟုတ်တော့ဘူးလေ….
မောင်ရုံးသွားတော့ သားလေးအတွက် ပြင်ရသည်။
သားက အခုမှ နို့ပြတ်တော့ အာဟာရဖြစ်အောင် ကြက်ပေါင်းရည် ကို ပဲ၊မုန်လာဥနီ၊ဆန် အနည်းငယ်နှင့် ပြန်ကျိုရသည်။
ပြန်ကျိုနေရင်း မနက်စာ ကို ကသောကမျော စားလိုက်သည်။
သားလေးကို ကိုယ်လက်သန့်စင်ပေးပီး အာဟာရကျိုထားတာ ခွံသည်။
သားသားစားပီးတော့ သားအမိနှစ်ယောက်လုံး အ၀တ်အစားလဲရင်း ဈေးသွားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပီ။
ဈေးက အိမ်နှင့် သိပ်မဝေးပါ…သားကိုတော့ စလွယ်သိုင်းကျောပိုးကာ ခြင်းတောင်းငယ်ကိုင်ပီး သွားလာနေကျပါ….
ဈေးမှာ မောင်ကြိုက်တက်တဲ့ ပုဇွန်ဆီလေးတွေ့တော့ ၀ယ်၊ငါးရံ့ နှင့် ဒန့်သလွန်သီးက နွယ့်အကြိုက် ပီးတော့ သားသားအတွက်
ကြက်သားနဲ့ လိုအပ်တဲ့ အသီးအရွက်လေးတွေ ၀ယ်ကာပြန်လာခဲ့သည်။
လစာကောင်းသော မောင့်ကြောင့် နွယ်တို့သားအမိ မပူမပင်နေရတာ… အားလုံး မောင့်ကျေးဇူးကြောင့်ပါ။
ကျောက်မြောင်းလေးလွှာရှိ တိုက်ခန်းကျယ်လေးရယ်၊မောင်ရုံးသွားဖို့ တပတ်ရစ်ကားလေးတစီးရယ် စုမိဆောင်းမိရှိခဲ့တယ်…
တိုက်ခန်းကနယ်ကမောင့်မိဘများကမောင်နဲ့နွယ်တို့ မင်္ဂလာဆောင် လက်ဖွဲ့အဖြစ် ၀ယ်ပေးခဲ့တာ…
ကားကတော့ ၀ယ်ဖြစ်တာ မကြာသေး…မောင်ရာထူးတိုးပီး လစာများလာတော့ အရင်စုမိထားတာလေးတွေနဲ့ တဖြည်းဖြည်းစုပီး ၀ယ်လိုက်တယ်….
ဒါကလဲ နွယ်ကိုယ်တိုင်က အသုံးနဲ့ အဖြုန်းခွဲခြားပီး မောင့်အတွက် စီးတဲ့ရေ ဆည်တဲ့ကန်သင်းဖြစ်ခဲ့တာကိုး…
မောင့်အတွက် နွယ်က အနှောင့်အယှက် တစ်ခု မဖြစ်ချင်ပါ…
“နွယ် ရုံးကလုပ်တဲ့ staff party ကို လိုက်ခဲ့ပါလား“
“Summit Park View မှာ နွယ်“
“နွယ် လူတွေကြားထဲနေရတာ မွန်းကျပ်တယ်….ပြီးတော့ နွယ်က မလှမပ၊မ၀တ်တက် မစားတက်နဲ့ မောင် မျက်နှာငယ်မှာ စိုးတယ်“
“မလိုပါဘူး နွယ်ရယ် …လိုက်ခဲ့ပါ“
“သားလေးလဲ ရှိသေးတယ်လေ နွယ် မလိုက်ပါရစေနဲ့..အဲအတွက် တောင်းပန်ပါတယ်မောင်“
“ကျွတ်“ဟု မောင်ညဉ်းတွားပြီး သူ့ဘာသာ ပြင်ဆင်ပြီး ထွက်သွားသည်။
အဲဒီညက မောင်အတော်နောက်ကျမှ ပြန်လာသည်။
နွယ့်ကို စိတ်ဆိုးသွားတာလား? စိတ်ပျက်သွားတာလားမောင်….?
စိတ်တော့ မပျက်လိုက်ပါနဲ့ မောင်ရယ်….
အခုတလော မောင့်ကို ကြည့်ရတာ တမျိုးပဲ…..
မနက်ဆိုလဲ meeting ဆိုပီး အိမ်မှ စောစောထွက် သည်။ည ဆိုလည်း အရင်တုံးကထက်စာလျှင် နောက်ကျသည်။
မေးတော့လည်း“ ကားတွေက အရင်လိုမဟုတ်ဘူး နွယ်ရဲ့ …အရမ်းကျပ်တာပဲ..အဲဒါမို့ နောက်ကျတာပါ“ တဲ့….
ဟုတ်မှာပါ နွယ်ကသာ ဘယ်မှ မသွားမလာနဲ့ ဘာမှ မသိတာနေမှာပါလေ….
ဖုန်းလာရင်လည်း အရင်လို နွယ့်အရှေ့မှာ မပြောပဲ ၀ရံတာဘက်ထွက်ထွက်ပြောတက်သည်။
ဟုတ်မှာပါ မိနွယ်သာ ဖုန်းရှိပေမဲ့ မောင့်ဆီကလွဲပီး ဆက်စရာမှ မရှိတာ..မောင်ကတော့ နယ်branchတွေနဲ့ ဖုန်းပြောရတော့ လိုင်းမမိတာနေမှာပါ…
နွယ့်ဘာသာ နွယ် ဖြေသိမ့်တက်ပါတယ် မောင်ရယ်…
မောင်သာ နွယ်တို့သားအမိကို ချစ်ခင်စောင့်ရှောက်နေရတာ ပင်ပန်းမှာပေါ့..နွယ် တဂျီဂျီ လုပ်နေရင် အလုပ်ပင်ပန်းနေတဲ့ မောင် စိတ်ပျက်သွားမှာ ကြောက်ပါတယ်…
မောင်က ရုံးတရုံးရဲ့ Marketing Manager ပဲလေ…ဒီလောက်တော့ အလုပ်ရှုပ်မှာပေါ့…
သားလေးအခုတလော အရမ်းထွားလာတော့ အရင်ဝတ်တဲ့ အင်္ကျီလေးတွေက သေးပီး ကျပ်ကုန်တယ် …..
ယုဇန ပလာဇာ သွားဝယ်ဦးမှပဲ …….
Taxi ဋ္ဌားပီး ထုံးစံအတိုင်း သားအမိ နှစ်ယောက် ထွက်လာလိုက်သည်။
မသွားတာကြာတော့ ဆိုင်တွေ လိုက်ရှာရတာနဲ့ မောလိုက်တာ….
ပလာဇာဘေးက ရွှေကမ္ဘောဇ သွားစားဦးမှပဲ…
“ဆန်စီး တစ်ပွဲပေး ညီမလေး…ပီးတော့ သံပုရာရည်တခွက်လည်းပေးနော်“
စားဖို့မှာရင်း သားလေးကို ကြည့်လိုက်တော့ အိပ်နေပီမို့ ရှေ့ဘက်သို့ပြောင်းပီးပွေ့ချီထားလိုက်သည်။
ဒါတောင် အအိပ်ဆတ်သော သားသား က အင့်ကနဲ တချက် ဖြစ်သွားသေးသည်။
“အေးပါ သားလေးရယ် အိပ်အိပ် ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်“
ဒီဆိုင်လေးက အမှတ်တရလေ ချစ်သူဘ၀တုန်းက မောင် နှင့် နွယ် ထိုင်နေကျ..
နွယ်က အဲတုန်းက ပလာဇာလေးထပ်မှာ ရှိတဲ့ ပရိဘောကဆိုင်က အရောင်းမိန်းကလေးပေါ့…ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မောင်ကြောင့်သာ နွယ် ဒီလို နေနိုင်နေတာ…
အတိတ်တို့ဆီရောက်သွားခိုက်မှာ နွယ့်နောက်ကျောဝိုင်းမှ ကောင်မလေးတသိုက် ရယ်လိုက်သံကြောင့် အာရုံတို့က ပစ္စုပ္ပန်သို့ ပြန်ရောက်လာသည်။
“အေး ငါ့ကိုလဲ မြင်ရော သူခိုးလူမိသွားတဲ့ အီလည်လည်မျက်နှာကြီးနဲ့ အရမ်းရီရတယ်“
“ဟဲ့ ကိုနေမင်းသူ က အဲ့ဆော်နဲ့သေချာတယ်နော်“
“သေချာတယ်… အသစ်ရောက်တာလေ မကြာသေးဘူး SPG လေဟာ ဆုကလျာ ဆိုတာ အလန်းလေး လေ“
“အော် အေး သိပီ ….ဟုတ်လား “
“မနက်ဆိုလဲ ရုံးအတူတူလာ အတူတူပြန်နဲ့ …အပြင်မှာ စုံတွဲခုတ်တာမြင်တာတော့ ၂ခါ ၊ ၃ခါရှိပီ ။ ထမင်းလည်း အတူတူထွက်စားတယ်လေ “
“အဲ့ ကိုနေမင်းသူမှာ အိမ်ထောင်နဲ့ ကလေးနဲ့ဆို“
“အခုခေတ် ကောင်မတွေကလည်း နံ့နံ့တက်တွေလေ အိမ်ထောင်ရှိတာ ကလေးရှိတာတွေ သိတော့တာမှ မဟုတ်တာ
ကိုနေမင်းသူကလည်း မန်နေဂျာဆိုတော့ ကပ်မှာပေါ့“
နေမင်းသူဆိုသည့် နာမည်ကြောင့် နွယ် နားထင်ကြောတွေစိမ့်သွားသည်။
“အေးလေ………Company က Marketing Manager ဆိုတော့ နည်းတဲ့ အရည်အချင်းလား…လစာလည်း ကောင်းတယ်လေ“
ဘုရား ဘုရား ဟုတလိုက်မိသည်။
ဒါ … ဒါ သူတို့ပြောနေတာ မောင်မှ မောင်အစစ်ပါ…
ဒီနာမည်၊ဒီကုမ္ပဏီ၊ဒီရာထူး ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးဟု နွယ်ဘယ်လို ငြင်းရမလဲမောင်…
နွယ်မျက်ရည် ပေါက်ကနဲ ပါးပြင်ပေါ်ကျလာသည်။
မြန်မြန်သုတ်ပစ်လိုက်မှ သားလေးပေါ်ထပ်ကျရင် သားလေးနိုးသွားလိမ့်မယ်…
မောင့်မျက်နှာ ကြည့်နေရတဲ့ နွယ်တို့သားအမိအပေါ် မောင်ရက်စက်လိုက်တာ…
နွယ် ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲ မောင်…..
ခင်ဇော် says: ခက်စတယ်။
ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေမရှိတဲ့ မိန်းမဆိုရင်တော့ ဒီအဖြစ်ဟာ သနားစရာ။
အရေးကြီးတာက ယောင်္ကျား ဝင်ငွေမှန်သမှ ကိုယ့်လက်ထဲရောက်အောင်အရင်လုပ်ထားရမှာ။
အပိုငွေမသုံးနိုင်တဲ့ယောင်းကျား ဟာ ဖောက်ပြန်ဖို့ အခွင့်နည်းပါးတယ်။
အလကား ရမှပဲ။ ဟိ။
ဒါမှမဟုတ် အငယ်တွေက ပေးပေါင်းမှပဲ ရမယ်။
အဲလို ဖောက်ပြန်မှုတွေ သိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အချစ်တို့ သားသမီးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး အသည်းနာမနေပဲ လုပ်သင့်တာ အရင်လုပ်။
သူ့ဆီက ရှိသမျှဟာ ကိုယ့်သားသမီး အတွက် ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကြံဆောင်ရမလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားးရမှာ။
ဒါမှ ကိုယ့်သားသမီးအပြင် တခြားမရှိမှာ။
နာ ဘာတွေ ပြောနေပါလိမ့် (စီဒီတူ ကျောက်)
La Yeik says: ဟုတ်ဒယ် မမဂျီး…အဲလိုလုပ်ပြိုက်ရမှာ ….ယောကျာ်းနဲ့သားသမီး မျက်နှာ တကမ္ဘာ ထင်နေတဲ့ မိန်းမတွေ သိပ်သနားဖို့ကောင်းဒယ်…
kai says: ကျုပ်ကတော့.. အောက်ကအဲဒီဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းတီဗီထဲကြည့်.. အဲဒီဝက်ဆိုက်ကြည့်ပြီး.. တွေးနေမိတယ်..။
ဖိုနဲ့မ..သာရှိတဲ့.. ဤကမ္ဘာကြီးမှာ… ကွယ်..။
Featured in the NY Times, 20/20, CNN, Dr. Phil and Dr. Drew, SeekingArrangement is the leading sugar daddy dating and sugar baby personals in the United States. Always FREE for Sugar Babies, we are the number one website for those seeking mutually beneficial relationships. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 176
La Yeik says: ဖိုနဲ့မ သဘောကို နားလည်ပါတယ် သဂျီးရယ်…ဒါပေမဲ့ စောင့်ထိန်းသင့်တာလေးတွေ စောင့်ထိန်းစေချင်တာပါ…single ဆို ကြိုက်သလောက်ကဲပါစေ….
kai says: ဘုရားလက်ထက်က.. ဥတ္တရာဆိုတဲ့မိန်းမဟာ.. ဗုဒ္ဓဆီမှာတရားနာနိုင်ဖို့.. သူ့ယောက်ျားကို..သီရိမာဆိုတဲ့.. ပြည့်တန်ဆာတယောက်ငှားပြီး.. အတူတူထားပေးဖူးတယ်…။
ပြောချင်တာက.. လက်ထပ်တယ်ဆိုတာ.. ဖိုနဲ့မ.. အပြန်အလှန်သဘောတူမျှမှုထားတာပဲဗျ…။ အဓိကအားဖြင့်.. ကာမကို..အပေးအယူ သဘောညီမျှမှုတခုထားကြတာဖြစ်ပါတယ်…
လူ့ဘ၀ဆိုတာက.. ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်တောင်.. ကိုယ်ပိုင်တာလိုက်လို့..။
အဲဒီသဘောနားလည်ရင်.. အိမ်ထောင်ရေးကြာရှည်တည်မယ်… ထင်..။ =
အဲဒီအပေါ်က.. သမီးနဲ့ဦးဝက်ဘ်ဆိုက်က.. တမျိုး..
အဓိကအားဖြင့်.. ကောလိပ်တက်လို့… ကျောင်းစရိပ်အကြွေးပိနေတဲ့.. ကောလိပ်ကျောင်းသူသမီးတွေကို… ငွေပိုလျှံနေတဲ့… ဦးဦးတွေက..မျှဝေခံစား.. စပွန်ဆာလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်..။
သမီးတွေလ်ညး အကြွေးကင်းကင်းနဲ့အလုပ်ကြမ်းမလုပ်ရပဲ.. ကျောင်းပြီး..
အဲ. ဦးဦးတရားဝင်မိန်းမတွေက.. ဘာဖြစ်မလည်းမသိ…။
မြန်မာပြည်မယ်.. ခေတ်စားလာရင်.. ကောင်းမယ်ထင်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 176
La Yeik says: အင်း ဒဂလိုဆိုရင်ဖြင့် အဲမိန်းကလေးတွေ ကျောင်းပီးကြလို့ လင်ကောင်းသားကောင်းယူကြတဲ့အခါမှာ အဲယောကျာ်းက အော် ငါ့မ်ိန်းမ ကျောင်းပီးအောင် ဒီလိုကျော်ဖြတ်လာတာပါလားလို့ နားလည်ပေးနိုင်ပါ့မလား သဂျီးရဲ့…..ပီးတော့ အဲအူးအူးတွေရဲ့ မိန်းမနဲ့သားသမီးတွေကလည်း ကုသိုလ်ရပါတယ် လို့ဆိုမလား မသိ….:k:
အော် ဆပွန်စာ ဆပွန်စာ……
kai says: အဲဒါ.. ယူအက်စ်မှာ…တကယ်ဖြစ်နေတာပါခင်ဗျ…။ ကောလိပ်ကျောင်းသူ သန်းချီပြီး Sugar Baby လုပ်နေကြတာ…။
မိန်မဟာ.. ငယ်စဉ်မှာ.. ငယ်ဂုဏ်နဲ့..လုပ်ချင်တာတွေလုပ်.. လုပ်တဲ့အခါမှာ နောင်ဘ၀(နောင်ရောက်လာမယ့် အသက်ကြီးသူဘ၀) အတွက်အထောက်အကူပျြုနိုင်တာတွေ.. ရွေးသွား…။
ကောလိပ်ပြီးလို့.. တက္ကသိုလ်ပြီးလို့.. ဘွဲ့တခုကိုင်ထားတဲ့.. အလုပ်ကောင်းလစာကောင်တဲ့မိန်းမကို.. ဘယ်တကောင့်သားက… “ငါ့မ်ိန်းမ ကျောင်းပီးအောင် ဒီလိုကျော်ဖြတ်လာတာပါလား” လို့ မေးရဲမယ်လို့.. ဆိုတော့..
မိန်းမမှာ.. အဆင်း မဟုတ်..။
ငယ်တုံး.. လူဘ၀ရခဲလှ.. တန်အောင်.. လုပ်ချင်တာတွေလုပ်ကြ….
လုပ်လို့ရှိရင်.. နောင်ဘ၀အတွက်လည်း… ရည်ရွယ်ကြ… =
How Sugar Daddies Are Financing College Education – The …
Sep 19, 2014 – Stephen is just one of the many men Amanda has met on Seeking … Men with annual incomes of over $5 or $10 million get the most attention. … But sex, I was told by multiple sugar babies, is what everybody’s thinking about.
In 2013, Seeking Arrangement announced that approximately 44 percent of its 2.3 million “babies” are in college. Was this answer helpful?LikeDislike 176
La Yeik says: ဟုတ်ပါပီ သဂျီးရယ်….ယူအက်စ်မှာ တော့ sex case တွေက ရိုးနေပီကော…သို့ပေမဲ့ ဒါက ဗမာပြည်ကော….ဗမာအမြင်နဲ့ပဲ ရေးကြည့်တာပါ သဂျီးမင်းရယ်…:k:
မြစပဲရိုး says: ကိုယ်လဲ မသိ တဲ့ အသိုင်းအဝိုင်း မို့ ဒီတစ်ခါတော့ ဝင် မငြင်း တော့ပါဘူး။
ဒီက ယဉ်ကျေးမှု မှာ သိသလောက် ကတော့ မိန်းမ ရှိ ရဲ့ တစ်ခြား တစ်ယောက် နဲ့ ရှုပ် ရင် မိန်းမ က တရားစွဲ ပြီး ကွာခိုင်း လို့ ကတော့ ရှိသမျှ ပြောင်ပြီမှတ်။
နောက်ပြီး အသိုင်းအဝိုင်း က ဒါမျိုး ထားတာ ကို လက်မခံ တာမို့ တော်ရုံရှုပ် တယ် မကြား ရဘူး။
ရှုပ်ချင်လဲ အကြောင်းပြချက် နဲ့ အရင်ခွဲ နေပြီး မှ တွဲ ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း မှ ကွာဖို့ လုပ်ပေါ့။
ယူကေ မှာ တက္ကသိုလ် တက်တဲ့ ကလေးတွေ ကျောင်းစရိတ် အတွက် အစိုးရ က ချေးပါတယ်။
အပို ထပ်ရချင်ရင် မက်ဒေါနယ် တို့ ဘာတို့ မှာအချိန်ပိုင်း လုပ်ကြပါတယ်။
ပိုက်ဆံ အတွက် အဖေလောက်ရှိ တဲ့ ဟာကြီး တွေ ဆီမှာ ခစား မဲ့ အစား သူတို့ နဲ့ ရွယ်တူ သူများ နဲ့ ကဲ လေ့ ရှိပါကြောင်း။
မဟုတ်ဘဲ အများ မျက်စိ စပါးမွေးစူး မဲ့ အကြောင်း လုပ်လို့ ကတော့ အတင်း ပြောတဲ့ သတင်းစာထဲ ခေါင်းစည်းမဲ နဲ့ သတင်း ပါလာလိမ့်မှာ။
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: စာရေးကောင်းလိုက်တာာာ
La Yeik says: ရေးပေါ့ အူးသူရ ရဲ့….အူးသူရ ရေးရင် ပိုကောင်းမှာ…ယောကျာ်းတွေ အကြောင်းသိရတာပေါ့…
CharTooLan says: ဘာမှမလုပ်နဲ့နွယ် ဒမာအုပဒေလာဘီ မူကျမ်းအဆင့်ကို ကျိရတာတော်တော်ကျက်သရေရှိတာလေ့
ကျုပ်တော့ တော်တော်သဘောကျဒယ် သောက်ကမျင်းကျောစွဲတဲ့သူခံကျေးဆိုတော့ကာ လူတိုင်နှစ်သက်ကြမယ်ထင့် :D
တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ကျင့်သုံးခြင်း ဥပဒေကြမ်းကို တရားလွှတ်တော်ချုပ်က ရေးဆွဲခဲ့ပြီး …
ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ မှာ … လွှတ်တော်ကို တင်ပြလိုက်ပါတယ် …
ဒီဥပဒေ နဲ့ အကျုံးဝင်သူတွေကတော့ …
၁။ ပြည်တွင်းပြည်ပ မြန်မာနိူင်ငံသား အားလုံး ….
၂။ နိူင်ငံသား မဟုတ်သော်လည်း .. မြန်မာပြည်တွင် နေထိုင်နေသူအားလုံး …
၃။ မြန်မာနိူင်ငံတွင် နေထိုင်စဉ် .. မြန်မာနိူင်ငံသား နှင့် လက်ထပ်သော … နိူင်ငံခြားသားများ အားလုံး တို့ ဖြစ်ပါတယ် ….
ဒီဥပဒေအရ … မည်သည့် ဘာသာဝင် ယောက်ျားမိန်းမ ဖြစ်စေ …. တရားဝင် ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်း မပြုဘဲ ….
နောက်ထပ် အိမ်ထောင်ပြုခြင်း … တရားမ၀င် ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခြင်း …. ပြု လို့လုံးဝ မရတော့ပါဘူး …
တကယ်လို့ပြုခဲ့ရင် …
လင်မယား ကွာရှင်းခွင့် တောင်းခံနိူင်ပါတယ် … ကွာရှင်းတဲ့ အချိန် ပစ္စည်းခွဲဝေရာမှာ … နောက် အိမ်ထောင်ပြုတဲ့ သူ ရဲ့… ပိုင်ဆိုင်ခွင့် အခွင့်အရေး …. အားလုံး ဆုံးရှုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ် …
အားလုံး ထားခဲ့ရမှာပါ ….
ဒါ့အပြင် တရားဝင်မကွာရှင်းဘဲ … နောက်အိမ်ထောင် ထပ်ပြုသူဟာ …
ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ၄၉၄ အရ …. ထောင်ဒဏ် ခုနှစ်နှစ်အထိ ကျခံရနိူင်ပါတယ် …
ကိုယ်အိမ်ထောင်ရှိတာကို ဖုံးထားပြီး … လိမ်ညာ လက်ထပ်ခဲ့ရင်လဲ …
ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၉၅ အရ … ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်အထိ ကျခံရပါလိမ့်မယ်…
ဒီဥပဒေကြမ်းကို တင်သွင်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ … အမျိုးသမီးတွေ မယားပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကို ကာကွယ်ဖို့ နဲ့…
အမျိုးသားတွေ မိန်းမအများအပြား ယူခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အိမ်ထောင်ရေးမှုခင်းတွေကို တားဆီးကာကွယ်ဖို့ လို့ဆိုပါတယ် …. လွှတ်တော်မှာ …. ဒီဥပဒေကို အတည်ပြုနိူင်မလားတော့ …..ကျွန်တော်တို့ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ …
( လက်ရှိ မေးကြည့်မိသလောက် … မိန်းကလေး အားလုံးကတော့ … ဒီ ဥပဒေကြမ်း ကို …. လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ထောက်ခံလျှက်ရှိနေပါတယ် … )
ဒါက မူရင်း ဥပဒေကြမ်း လင့်ဖြစ်ပါတယ် ….
La Yeik says: ၇နှစ်က နည်းသလားလို့…အာဟိ..
uncle gyi says: ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝ
La Yeik says: အိုးချင်းထား အိုးချင်းထိ၊ကြိုးချင်းထား ကြိုးချင်းငြိပေါ့ အန်ကယ်ဂျီးရေ…..အခုခေတ်က ခင်သန်းနုထက် ဆိုးတဲ့ မ်ိန်းမတွေ ရှိတယ်လေ….
hmee says: ချာတူး​ရေ အရာရာတိုင်းဟာ အဆိုးအ​ကောင်း နှစ်​ခုရှိမြဲမို့ အဲ့ ဥပ​ဒေ အတည်​ဖြစ်​ရင်​​တောင်​ တခြားတဖက်​က မလွယ်​​လောက်​ဘူးတဲ့။ ဥပ​ဒေအ​ကြောင်း ​နော​ကျေ​နေတဲ့ မမှီ ​ယောက်​ခမက ​ပြောပြတယ်​။ မမှီက မိန်းမ​တွေ အတွက်​ ​ကောင်းလိုက်​တာလို့ ဝမ်းသာအားရ​ပြောလို့​လေ။ ကိုယ်​က ဥပ​ဒေမှ နားမလည်​တာ။ အခု​ခေတ်​က ​ယောက်​ကျား​လေးကလည်း လင်​ရှိမိန်းမကို မ​ရှောင်​ မိန်းမကလည်း မယားရှိ​ယောက်​ကျားကို မ​ရှောင်​။ သူ​တော်​​ကောင်းတို့ တကယ်​ကို တရားပျက်​ပြီ ထင်​ပါရဲ့။
La Yeik says: ဥပဒေ အကြောင်းတော့ သေချာနားမလည်ပါဘူး မမှီရယ်…ဒါပေမဲ့ ဒီဥပဒေ အတည်ဖြစ်သွားရင် လက်ထက်တာတွေ ထက် LT တွေ ပိုများခေတ်စားလာမလားပဲ….နိုင်ငံဂျားမှာလိုပေါ့ ကလေးတွေရမှ လက်ထပ်ကြတာတွေလေ…..အကောင်းနဲ့ အဆိုးကဒွန်တွဲနေမှာပါပဲ…လက်ထက်ပီးသားလူတွေအတွက်တော့ ဒီဥပဒေက ကောင်းမှာပါ…လက်မထက်ရသေးတဲ့ လူတွေကတော့ လက်ထက်ဖို့ ပိုစဉ်းစားလာကြမလားပဲနော်…..
hmee says: LT လည်းမရဘူးတဲ့။ နှစ်​ဦးသ​ဘောတူလို့ ကြည့်​ဖြူရင်​​သော်​မှ ပတ်​ဝန်းကျင်​က တရားလို့လုပ်​ တိုင်​ကြားလို့ရပြန်​သမို့ အမှု ​မြောက်​ပြန်​သတဲ့။ LT ဖို့ စဉ်းစားထားရင်​လည်း မလွယ်​ဘူး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 176
La Yeik says: အော်…ဟုတ်လား….ဒါဆို ပိုကောင်းမယ်ထင်တာပဲ….တလင်တမယားစနစ်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ တော်တော်ကောင်းမယ့် ဥပဒေလို့ထင်တာပဲ မမှီေ၇… မမှီ ​ယောက်​ခမပြောတဲ့ အခြားတဖက်ဆိုတာတော့ သိချင်သား…..
Was this answer helpful?LikeDislike 7169
kyeemite says: .စာရေးကောင်းသားပဲဗျ….ဆက်ရန်စောင့်ဖတ်ပါအုံးမယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 176
La Yeik says: ကျေးဇူးပါ အူးမိုက်…..
ကန္နားစီး မိဂီ says: မာကတ္တာတေကို စော်ကားထားတယ်ကျန်းးးးး…
ခညားကို ဟိုမာကတ္တာ လာဆဲလိမ့်မယ်…
La Yeik says: မာကတ္တာ က ဘာရီးဒုံး အူးလေး…
ကန္နားစီး မိဂီ says: ကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့ တဖက်မှာ လုယက်မှုရှိတယ်.. တဖက်ခြမ်းမှာ ပေးကမ်းလှူဒါန်းမှုရှိတယ်
မားကတ္တင်းမှ မရှိရင် လူတွေဟာ … သစ်ပင်အောက်မှာ ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ ဗိုက်ဟောင်းလောင်း ဖြစ်နေလိမ့်မယ်..
La Yeik says: အော်…ဂလို….မှတ်ထားလိုက်ပါပီး အူးလေး
sorrow says: ..ကဲကြည့်…ဒီပို့စ်ထဲက မာကတ်တာလုပ်နေပြီး..အဲ့လောက်အတဲ့လူမမြင်ဖူးလို့
.လစာဆယ်သိန်းပေးမယ်..ကျော်လို ဖားတပိုင်းငါးတပိုင်း မာကတ်တာတောင် အဲ့လောက်မအ…အဟိဟိ
sorrow says: ..နော့် ဆြာလေး နော့်….ကျော်တောင်အဲ့လောက်မအ..အဟိဟိ
La Yeik says: ဇာတ်လမ်းထဲက မာကတ်တင်းမန်နေဂျာကို တူတိတ်အတဲယားနေပုံပဲ….
နေရာချင်းသာ လဲလိုက်ချင်ရဲ့….အဲဒလိုလား အူးလေး
ကန္နားစီး မိဂီ says: ဂလိုစိတယ် ဆြာဆောရိုးရဲ့
ကျုပ်တို့ မာကတ္တာတွေက အသီးမမာဘူး ဦးလေးရဲ့…
ကျုပ် ဆို ခနခန နာနေရတာ…
အသီး ဆိုတာ နာရင် ရောင်သွားတယ်.. ရောင်တော့ ကြီးသွားတယ်..
ကြီးသွားတော့ နောက်တျောက် ပိုဆန့်သွားတယ်လေ…
ဟိုဆြာတော်ကြီး တရား ကို ကျုပ်က လက်ကိုင်ထားပါတယ်ဗျာ…
ဒကာလေး တဲ့ …လောကမှာ ဘာမှ မတည်မြဲဘူးတဲ့ … ဆိုတော့ ဘာမှ အတည်မယူနဲ့တဲ့….
အဲ့လိုနဲ့ ကျုပ်လည်း အတည်မယူဘဲ… တျောက်ပီး တျောက်တွဲနေတာဗျဲရယ်….
ခီညားနဲ့ မသွားဖြစ်ပေမယ့် ကျနော် ရှမ်းပြည်ရောက်ဖို့ အကြောင်းတွေ ဖန်နေပါဂျောင်းးးးးး
တောင်ပေါ်သား says: အဲဒီမန်နေဂျာက ဈေးကွက်ချဲ့ ဖို့ မားကက်တင်းဆင်းတာနေမှာပါကွယ် ၊ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 176
La Yeik says: ဟုတ်ရား အူးအူးတောင်ပေါ်သား…မီးမတိလို့ဘာနော် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 52
chate chate says: လက်ထပ်တယ်ဆိုတာ sex ကိစအပေးအယူ ရုပ်ဝတ်ထုကိစတစ်ခုတည်းအတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ လင် မယားဖြစ်ပြီဆိုကတည်းက ချစ်သူလို အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းလို မိတ်ဆွေလို လည်းဟုတ်တယ်။ ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာ ကျားဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသောသူအပေါ် ယုံကြည်မှုကို အလွဲသုံးစားလုပ်တာ သစ်စာဖောက်တာပါပဲ ၊
La Yeik says: sex ကိစ္စ တစ်ခုထဲ အတွက်နဲ့ လက်ထပ်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီယောကျာ်းဟာ ယောကျာ်းကောင်း ဖြစ်မဖြစ်တော့ မသိဘူး…ယောကျာ်းမြတ်တော့ မဟုတ်ဘူး…လူပီသတဲ့လူ မဟုတ်တော့ဘူး…သစ္စာတရား နဲ့ နားလည်မှု ပါအခြေခံတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးမှ